Thumela 3 isetha umshini we-peanut decorticator kumakhasimende aseSudan
I-peanut nayo yaziwa ngokuthi i -nutnut okuyisitshalo se-legume esitshalwa ikakhulu imbewu yayo edliwayo. I-Groundnut ikhule ngaphezulu 22.2 amahektha ayisigidi emhlabeni wonke, isetshenziswe amashumi eminyaka njengomthombo obalulekile ocebile wamaprotheni kubantu emazweni asathuthuka, kuyilapho uwoyela wayo, ikhekhe nokuhanjiswa kusetshenziswa ngokwesiko njengokudla kwezilwane. kukhula kabanzi ezindaweni ezishisayo nasezindaweni eziphansi, njenge-Asia ne-Afrika.it ibaluleke kakhulu kumkhiqizi omncane wokuthengisa omkhulu.
Lo mbuso ongowokuzalwa waseNingizimu Melika ulethwe e-Afrika ngabokufika baseNtshonalanga Afrika mayelana 200 iminyaka edlule. Namuhla, ISudan iyaziqhenya 14% komkhiqizo womhlaba wonke wethanga,ongomunye wabakhiqizi abahlanu abaphambili emhlabeni wonke ohlinzeka ngokushintshaniswa okudingakalayo kwangaphandle kweSudan. Empeleni, inhlabathi eklanyiwe imele cishe 35% wezindawo zezitshalo eziphelele.
Ukuvunwa kwenzeka ngasekupheleni kuka-Okthoba kuya kuNovemba eSudan. Ngemuva kokuba amantongomane asomile ngokwanele, abalimi bayayidinga ukuyikhipha bese bayishutheka maduze. Kubalulekile ukuthi amantongomane omiswe kahle futhi agcinwe ngaphansi kwezimo ezomile. Kepha kukhona nje umshini omncane wamantongomane ongasiza umlimi ukuthi enze i-peanut shelling.Ningi endaweni yeSudan ,kwenziwa ngesandla.Abesifazane baseMelika bahambisa izinkulungwane zamantongomane ngesandla. Kwakuhamba kancane, umsebenzi obuhlungu owenze iminwe yabo yopha. Ngesikhathi sokusebenza isikhathi eside ,peanut ezimweni zokugcina ezingezinhle, zingangenwa yisikhunta sokukhunta i-Aspergillus. Izinhlobo eziningi zale ukhunta zidedela izinto ezinobuthi futhi ezi-carcinogenic ezibizwa ngama-aflatoxins.if imbewu itheleleka isikhunta i-Aspergillus flavus,kuzobe kungasizi ngalutho emakethe,okusho ukuthi umlimi uzolahlekelwa yimiphumela yabo yabasebenzi yonyaka.
I-peanut decorticator eSudan
Abanye abantu babona lesi simo futhi bafuna ukusiza umlimi ukuthi enze lo msebenzi kalula .Omunye ikhasimende lethu uyale 3 usetha umshini we-diesel peanut decorticator ekuqaleni kukaMashi. ufuna ukusebenzisa lo mshini we-peanut sheller ukuze ugobele ubhontshisi wakhe ,futhi futhi ufuna ukusebenzisa lo mshini ukusonga amantongomane esigodini sakhe abanye abalimi.Ngokushoda kukagesi wendawo ,ucele ukuthi sihambise injini yedizili ye-peanut decorticator.it izosiza kakhulu kunemoto kagesi ezweni lakhe. Siphinde sambonisa i-manual peanut decorticatorl.he uthe kuzoba wusizo olukhulu ezindaweni ezikude eSudan,omunye wabangani bakhe ufuna umshini onjalo.uzomethula kithi.maybe singabambisana ngenyanga ezayo ngomshini wamapheya we-peanut decorticator.